Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina mahatonga ny olombelona II | Tontolo alika
Manohy ny lohahevitra omaly, momba ny fomba ahariharantsika olombelona ny alika amin'ny fihetsem-po ratsy, androany isika dia hiresaka lohahevitra iray izay mifanitsy amin'ity iray ity, Ahoana no ampitantsika ny fientanam-pontsika amin'ny biby?s. Lohahevitra lava io, izay ezahiko tsy hasiana fanazavana be loatra.
Raha vantany vao hitantsika ny filàna fototra 11 handrakofana alika, ary omena ny fironana ara-pirazanana (raha azo atao), iray ihany ny loharanon'ny fihenjanana US. Avelako ianao miaraka tsy misy bebe kokoa Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina ateraky ny olombelona. Manantena aho fa tianao izany.
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha, Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina ateraky ny olombelona, Miresaka momba ny fomba hamokarantsika fihetseham-po ratsy ho an'ny alikantsika ary indrindra ho an'ny fifandraisantsika aminy. Tsy fantatsika, tsy miditra amin'ny herin'ny ratsy isika izay mitarika antsika handray fanapahan-kevitra haingana momba ny biby fiompintsikaa.
Androany aho dia hiresaka momba ny fomba ampitantsika ny fihenjanana sy ny fanahiana amin'ilay alika, ka miteraka adin-tsaina izay, raha tazonina, dia mety ho pathological ary hiafara amin'ny Chronic Distress, izay zavatra mampidi-doza tokoa.
Araka ny filazan'ny lehibe Silvia Beserán an'ny GEDVA (Manoro hevitra anao aho mba hitady izany sy hihaino, fantany izay lazainy), misy fomba roa hifantohana sy hampitana ny fihetsem-pontsika amin'ilay alika:
Fiara mivantana: Mora ny manazava sy mahatakatra izany. Raha miantsoantso ny alikanao ianao, tezitra aminy, mahery setra, na miresaka aminy am-pitiavana be loatra, hiafara amin'ny fisafotofotoana, fanakanana ary fanamafisana azy ianao. Tokony hiresaka amin'ny alikantsika amin'ny tonony milamina sy milamina foana isika, manao hafatra fohy sy malemy ary tsara. Tsy tokony hiresaka amin'ny alikantsika isika, hoy hatrany aho. Mampifangaro azy ireo izany.
Fampitana tsy mivantana: Rehefa mahatsapa ny fihetsem-po isika, nefa tsy milaza izany. Somary sarotra kokoa ny manazava izany, na izany aza dia hataoko mora foana. Alao an-tsaina hoe mandeha amin'ny arabe miaraka amin'ny alikao ianao ary mahita olona iray. Amin'izay fotoana izay, rehefa miampita amin'ny haavon'ny mpandeha an-tongotra ianao dia mieritreritra fa hanakaiky loatra ny alikao ary hisintona ny fehikibo hampihemorana azy ianao. Manolotra fanoherana ny alika, ary adikao fa misy ny mety ho an'ny bibyo, tsy manaikitra na milelaka intsony ny olon-tsy fantatra manelingelina azyRaha tsy izany dia kitiho fotsiny izy io, ary alohan'ity mety hitranga ity dia mihenjana ianao ary manipy bebe kokoa, alohan'ny alatsaky ny alika indray, satria biby izay matetika manohitra ny karazana fanentanana, dia mahazatra azy ny manao izany. Alohan'ity dia miverina misintona hery misimisy kokoa ianao, eo anelanelan'ny fihinanan'ny alika, fa sady tsy mibedy azy ianao na miantsoantso azy na milaza ny fahatezeranao aminy. Mandeha lavitra ny toe-javatra ianao, sorena sy misento. Efa mba nanontany tena ve ianao hoe ahoana ny fahazoan'ny alika azy?
Ny biby dia mifandray amintsika amin'ny sehatra saika ara-batana. Ny alika dia afaka mahatsikaritra ny fiovantsika amin'ny mari-pana, ny tosidra, mamaky ny fihetsiky ny vatantsika amin'ny haavon'ny The Mentalist (Patrick Jane) na jereo ny fihenan'ny mpianatsika manodidina ny 8 na 9 metatra miala antsika. Amin'izany no tiako hilazana aminao fa tsy mora adalaina izy. Misy ny alika mahita karazana homamiadana sasany.
Tamin'ny tranga teo aloha dia nihaona tamina olona teny an-dalambe izahay ary naneho hevitra talohan'ny nanatonan'ny alika alika ny olon-tsy fantatra sy ny fahatezerana taorian'io. Rehefa henjana dia mahatsikaritra azy ilay alika. Ao an-dohany dia misy hevitra mazava mipoitra: lasa saro-kenatra ny namako olombelona. Ho ahy dia tsy afaka ny hiaraka aminy aho. Tokony hisy an'io. Ary mihetsika. Nanatona izy hijery raha mandrahona ilay vahiny. Ary sakananao tsy hanakaiky azy ny fisintomanao azy amin'ny fehikibo, amin'izay dia manakana azy tsy hampiasa ny orony ianao hijerena ny mety ho fandrahonana ary hamerina azy amin'ny fihenjanana. Ianao ara-batana dia manomboka mahatsapa ny fihetsika amin'ny vatana izay efa nifaneraseran'ny alikao rehefa marary ianao. Ary izany dia hahatonga anao hiala any miaraka amin'ny fahatsapana ratsy, ary mino fa ny vahiny dia fahavalo. Azo inoana fa raha manohy mamehy azy amin'izany fihenjanana izany ianao, ny sasany manomboka mampirongatra ady amin'ny olon-tsy fantatra.
Tonga hatreto isika. Rahampitso. Miarahaba ary tandremo ny fon'ny alikao !!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina mahatonga ny olombelona II
Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina ateraky ny olombelona